अष्ट्रियामा आफ्नै तीन सन्तानको ह’त्या गर्ने नेपाली म’हिला को हुन् ? किन यस्तो गरिन् ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अष्ट्रियामा आफ्नै तीन सन्तानको ह’त्या गर्ने नेपाली म’हिला को हुन् ? किन यस्तो गरिन् ?
अष्ट्रियामा आफ्नै तीन सन्तानको ह’त्या गर्ने नेपाली म’हिला को हुन् ? किन यस्तो गरिन् ?
काठमाडौं। अष्ट्रियामा एक नेपाली महिला आफ्नै तीन सन्ता’नको ह’त्या गरेको अ’भियोगमा प’क्राउ परेकी छिन् । उनले शनिबार आफ्ना तीन सन्ता’नको ह’त्या गरेपछि आफैं प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । उनले घट’नास्थलमा प्रहरी आएपछि आफैंले आफ्ना तीन सन्तानको ह’त्या गरेको बताएकी थिइन् । ती महिलालाई प्रहरीले नि’यन्त्र’णमा लिएर थप अ’नुसन्धा’न गरिरहेको छ ।
स्थानीय मिडियाका अनुसार ती नेपाली महिलाका श्रीमान उनी’सँग बस्दैनथे । महिला आफ्ना तीन सन्तानसँग बस्थिन् भने उनका श्रीमान उनीसँग छु’ट्टिएर बस्दै आएका थिए । श्रीमानसँग छुट्टिएर बसेको उनको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई हेरेर प्रहरीले पारिवारिक क’लह’का कारण घ’टना भएको हुन सक्ने प्रा’रम्भिक अनुमान गरेको छ ।
घ’टनास्थलमा प्रहरी पुग्दा महिला स्व’यं पनि घाइ’ते थिइन् । उनले आफ्नै हा’त का’ट्ने प्रयास गरेको हुन सक्ने चो’टको प्रकृतिले देखाएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय मिडियाले लेखेका छन् । उनले पनि आ’त्मह’त्या गर्ने प्रयास गरेको पृष्ठभूमिले पनि उनलाई यस्तो अ’पराध’तर्फ मानसिक त’नावले उक्साएको अनुमान गरिएको छ ।
उनले आना नौ वर्षीय छोरी, तीन वर्षीय छोरी र आठ महिने छो’राको ह’त्या गरेको बताएकी छिन् । प्रहरी उनी बसेको अ’पार्टमेन्टमा पुग्दा तीन वर्षीय बालिका र आठ महिने बालकको ज्या’न गइसकेको थियो तर नौ वर्षीय बालिकाको सास चल्दै गरेको पाइएकोले उनलाई तत्काल अस्पताल लगिएको थियो तर अस्पतालमा उनको ज्या’न गयो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रिया उच्च स्रोतले डिसीनेपाललाई दिएको जानकारी अनुसार ती महिला बुटवलकी ३१ वर्षकी चन्द्रा भट्टराई अर्याल हुन् । यस विषयमा भियनास्थित नेपाली दूतावासले स्थानीय प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेको बताएको छ ।
दूतावासले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको छ ‘आज मिति १७ अक्टोबर २०२० का दिन भियनामा घटे’को अ’कल्पनीय घट’नाप्रति सम्पूर्ण नेपाली समुदाय सहित यस राजदूतावास परिवार समेत अ’त्यन्त दु’खित रहेको छ । सो घट’नाका सन्दर्भमा स्थानीय प्रहरीसँग राजदूतावास नियमित स’म्पर्कमा रहिरहेको छ ।’
आजपनि घट्यो सुनको भाउ : तोलाको कति छ हेर्नुहोस् ।
दुखद खबर : मोटरसा’इकल दु८र्घ’टना मा परी २० वर्षिय सन्तोष को अ’कालमै ज्या’न् गयो !
अब उपत्यका प्रवेश गर्न अनिवार्य यी कागजपत्र चाहिने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारि गर्यो यस्तो सूचना
घट्दै बढ्दै आएको सुनचाँदीको आजको मूल्य यस्तो छ
नेपालमा शनिबार बिहानै १७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि